Guddi Hoosaadka Deegaanka Ee Golaha Wakiiladda Oo Kormeeray Shirkadaha Sahanka Shidaalka Ee Magaaladda Burco | Salaan Media
Home Wararka Guddi Hoosaadka Deegaanka Ee Golaha Wakiiladda Oo Kormeeray Shirkadaha Sahanka Shidaalka Ee...
Aug 2, 2013 Hargeysa(SM)– Guddida deegaanka & khayraadka dabiiciga ah oo golaha Wakiiladda ayaa kormeer ku soo sameeyay labadii siciidcisho ee ugu danbeeyay xarumaha shirkadda sahanka Shiidaalka Genel Energy ee magaaladda Burco, halkaas oo ay kulamo kula yeesheen Madaxda Shirkadaasi.
Warsaxaafadeed ay Guddidu ka soo saartay Kormeerkoodaas ayaa waxa uu u dhignaa sidan:-
Guddida Deegaanka & Khayraadka Dabiiciga ah waxay shir ay ku yeelatay Xafiiska Guddida ee Golaha Wakiilada taariikhdu markay ahayd 28kii bishii May, 2013 [Tixraac GW/G/17/151/2013] ku go’aamisey labada qodob ee kala ah:
1. In Gudidu kormeer xog raadis ah ku soo marto goobaha Macdan & Shidaal Baadhista iyadoo lala kulmayo dhammaan daneeyeyaasha hawshan [Stakeholders].
2. In la diyaariyo warbixin guud oo ku saabsan hawlaha Macdanta iyo Shidaalka si loogu gudbiyo Goleweynaha.
Haddaba, iyadoo laga shidaal qaadanayo go’aankaas ayaa, maalmihii 31ka July – 1da August, 2013 waxaa guddida u suuragashay inay booqasho xog-raadis ah ku soo maraan Degmada Burco oo ay hadda ka socdaan hawlaha sahaminta shidaalku. Waxay xubnihii guddida goluhu si rasmi ah shirar ula qaateen Wakiilada Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta ee Gobolka Togdheer, xubno ka mid ah odayaasha iyo waxgarad degaanka, iyo saraakiisha shirkadda ku hawlan sahanka shidaalka ee GENEL ENERGY.
Waa markii ugu horreysey ee Golaha Wakiiladu si rasmi ah u kormeero, una xogogaalsado hawlaha shirkadaha shidaal-baadhista iyagoo soo dhoweyn iyo furfurnaansho ka helaya Xukuumadda, waxayna tani bilaw fiican u tahay xidhiidhka labada gole [Golaha Wakiilada iyo Golaha Xukuumadda] ee dhanka barnaamijyada shidaalka iyo macdanta. Dhanka kale waxaa maanta halkaa ku hadhay ‘xantii’ hawlaha shidaal-baadhista ee ahayd xukuumaddu waxbay qarsanaysaa.
Muddadii ay Guddidu ku guda jirtey fadhiyada iyo kormeerka ka dhashay booqashadan, waxay Guddidu xaqiiqsadeen baaxadda ay leedahay maal-gelinta iyo hawsha ka socota degaankaasi, waxaana muuqatay sida loogu baahanyahay iyo muhiimadda ay leedahay dhammaan hay’adaha qaranka iyo bulshaduba inay si wadajir ah, kuna fadhida sharciga iyo danta guud ee qaranka, ugu hawl galaan meelmarinta mashruucan.
Waxaanu u mahadcelinaynaa dhammaan intii ka hawlgashay fududaynta booqashadan. Waxaa mahad gaar ah leh xukuumadda oo uu ugu horreeyo Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud iyo Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Mudane Xuseen Axmed Ducaale oo amray cid kasta oo aanu u baahnayn inaanu xog-waraysano inay si daahfurnaan [transparent] ah noogu warbixiso. Waxaan marnaba la ilaabi Karin soo dhoweyntii uu Guddida ku qaabiley Isuduwaha Wasaaradda Macdanta & Tamarta ee Gobolka Togdheer. Sidoo kale waxaanu u mahdcelinaynaa odayaasha iyo bulshada Degmada Burco ee aanu la kulanay iyo saraakiisha Shirkadda Genel Energy oo si qadarin sare leh noo soo dhoweeyey isla markaana si saraaxad leh uga war celiyey su’aalihii aanu qabney. Waxaanu sidaasi si le’eg u mahad celineynaa Shirguddoonka Golaha Wakiilada oo qayb lixaad leh ku lahaa meelmarinta booqashadan xog-raadinta ah.
Waxaanu rajaynaynaa inaanu muddo dhow soo gunaanadi doono warbixintayada annagoo la kulmi doona saraakiisha ugu sarraysa Wasaaradda Macdanta & Tamarta, kadibna Goleweynaha u soo gudbin doona Warbixinta ugu dambaysa.
Xil. Siciid Maxamed Cilmi
GUDDIDA DEEGAANKA & KHAYRAADKA DABIICIGA AH